'युद्धका बेला त विदेशीलाई शरण दिनुपर्छ, कोरोनाले ठप्प भएको बेला किन नदिने?' :: युवराज श्रेष्ठ :: Setopati
'युद्धका बेला त विदेशीलाई शरण दिनुपर्छ, कोरोनाले ठप्प भएको बेला किन नदिने?'
लकडाउनले पोखरामा अड्किएकी अमेरिकी नागकि जेनिफर। तस्वीर सौजन्य: जेनिफर
अमेरिकी नागरिक जेनिफर विश्व भ्रमणमा निस्कँदा कोही पनि साथी थिएनन्। जहाँ–जहाँ घुम्न गइन्, त्यहीँ उनले साथी बनाइन्।
कोरोना महामारीले डेढ वर्षयता पोखरामा थुनिएकी ३९ वर्षीय जेनिफरले भिन्न–भिन्न देशका ५ जना साथी बनाएकी छिन्। उनीहरू एउटा होटलमा साथसाथ बस्छन्। जहाँ उनीहरू आफैं मिलेर खाना बनाउँछन्, बाँडीचुँडी खान्छन्।
अमेरिकाको मासाचुसेट्स राज्यकी नागरिक जेनिफरको पतिको घर दक्षिण एसियाली राष्ट्र लावस हो। उनी पहिले लावस बस्दा बार चलाउँथिन्। व्यवसाय राम्रो थियो। जब उनका श्रीमानको क्यान्सरका कारण ६ वर्षअघि निधन भयो, उनलाई पैसा कमाउन मन लागेन। उनले चलिरहेको बार बेचिन्। त्यही पैसाले विश्व भ्रमणमा निस्किइन्।
विश्वका विभिन्न देश घुम्ने क्रममा उनी पटक-पटक भारत गएकी थिइन्। तर नेपाल छिरिनन्। इन्टरनेटमा घुम्दाघुम्दै एक दिन उनको आँखा नेपालमा पर्‍यो, त्यसपछि नै उनी नेपाल आउन प्रेरित भएकी थिइन्।
‘मैले इन्टरनेटमा देखेको भन्दा धेरै सुन्दर रहेछ नेपाल’, उनले भनिन्, ‘यति राम्रो ठाउँ घुम्न पाउँदा एकदम खुसी छु, लामो समय नेपालमै बस्न चाहन्छु।’
अमेरिकाबाट नेपाल आउँदा उनले पदयात्रा र योगा तालिम लिने योजना बुनेकी थिइन्। जसअनुसार उनले सगरमाथा बेस क्याम्पसम्म पदयात्रा गरिन्। जेनिफर सगरमाथा बेस क्याम्प पदयात्रा जाँदा विश्वभर कोरोना महामारी फैलँदैथियो। अमेरिकासहित विश्वका अधिकांश मुलुक लकडाउनको तयारीमा थिए।
सगरमाथा बेस क्याम्प पदयात्रा जाँदा कोरोना महामारीको डरले धेरै पर्यटक फर्किसकेका थिए। त्यतिबेला पदमार्गमा उनले जम्मा १२ जना विदेशी मात्र आफूले भेटेको बताइन्।
जेनिफर र विभिन्न देशका उनका साथाीहरू ।
‘नेपालको प्रकृति कति शान्त रहेछ, सगरमाथा बेस क्याम्प जाँदा देखें,’ जेनिफरले भनिन्, ‘अरू पर्यटक आफ्नो देश फर्कंदै थिए, म सगरमाथा आधार शिविर पुगेरै छाडेँ।’
अमेरिकाबाट १ मार्च २०२० (१८ फागुन २०७६) मा काठमाडौं ओर्लिएकी जेनिफर सगरमाथा बेस क्याम्पबाट फर्केर सिधै पोखरा आइन्। पोखरामा उनलाई योगा तालिम लिनुथियो। पासपोर्टमा ३ महिनाको पर्यटक भिसा लगाएर नेपाल आएको महिना दिन नपुग्दै नेपालमा पनि ११ चैत २०७६ मा देशव्यापी लकडाउन आह्वान भयो। जेनिफर पोखरामै थुनिइन्।
अमेरिकासहित विभिन्न देशको दूतावासले आफ्ना नागरिकलाई स्वदेश फर्काउन विमान चार्टर्ड गरिरहेका थिए। जेनिफर छिट्टै लकडाउन खुल्ला र योगा तालिम लिन पाइएला भनेर नेपालमै बसिन्। त्यसो त उनको देश अमेरिकासहित विश्वका धेरै मुलुकमा कोरोनाको पहिलो लहरमै धेरै मानिस संक्रमित भएका थिए, कैयौंले ज्यान गुमाइरहेका थिए।
‘त्यतिबेला नेपालमै सुरक्षित हुन्छौं भनेर पनि हामी देश फर्किएनौं’, जेनिफरले भनिन्, ‘नेपाल सरकारले पनि जहाँ छ, त्यहीँ बस्नू भनेकाले हामी यहीँ बस्न चाह्यौं।’
लकडाउनमा नेपालमै रहेका विदेशी पर्यटकको भिसा नि:शुल्क थप्ने सरकारले नीति लिएको थियो। त्यसको लाभ जेनिफरले पनि पाइन्। झण्डै ६ महिना लामो लकडाउनपछि कोरोना भाइरस केही नियन्त्रणमा आयो। जेनिफरले लेकसाइडको एउटा रिसोर्टमा ५०० घण्टा लामो योगा तालिम लिइन्।
पोखरा बस्दा आसपासका डाँडाहरूमा उनले पदयात्रा गरिन्। लेकसाइडमा उनले फिटनेस तालिम चलाइन्। त्यसो त उनले अमेरिका र लावसमा पनि फिटनेस तालिम चलाएको बताउँछिन्। लकडाउनमा थुनिएर बस्दा होस् या खुला हुँदा घुमफिरमा निस्कँदा उनले भित्रभित्रै नेपाल मन पराउन थालिन्। सरकारले तोकेको शुल्क तिर्दै नेपाल बस्न भिसा थप्न थालिन्।
पोखरा आसपास घुमेर दिन बिताउँदा बिताउँदै कोरोना भाइरसको दोस्रो लहर चल्यो। वैशाख तेस्रो सातादेखि फेरि पोखरामा लकडाउन भयो। पोखरामा अझै आंशिक लकडाउन जारी छ। यहीबेला सरकारले बिहीबार जारी गरेको एउटा सूचनाले जेनिफर बेचैनीमा परेकी छिन् ।
अध्यागमन कार्यालय पोखरामा भिसा थप्न र शुल्क तिर्न पुगेका विदेशी। तस्वीर– युवराज श्रेष्ठ/सेतोपाटी
सरकारले जारी गरेको सूचनामा ३ वटा बुँदा छ।
पहिलो बुँदामा दोस्रो लकडाउन अवधिको भिसा नि:शुल्क नियमित गर्ने उल्लेख छ। दोस्रो बुँदामा नेपालमा बसाइँ थप्न चाहने विदेशी पर्यटकले शुक्रबारदेखि अध्यागमन विभागमा आवेदन दिनुपर्ने र तेस्रोमा १ साउनदेखि नेपालबाट बाहिरिन चाहने पर्यटकको हकमा भिसा शुल्क, विलम्ब शुल्क र जरिवाना लाग्ने उल्लेख छ।
नेपालमा अड्किएका विदेशी पर्यटकलाई सबभन्दा पेच पारेको तेस्रो बुँदाले हो। जहाँ अध्यागमन कानुन अनुसार एक भिसा वर्षमा १५० दिन बस्न सकिने व्यवस्था रहे पनि लकडाउनको अवधि छाडेर एक भिसा वर्षमा २१० दिन मात्रै नेपाल बस्न पाउने सरकारको निर्णय छ। यो निर्णयले जेनिफर र उनका साथीहरूलाई नेपाल बस्न दिँदैन।
लकडाउनको अवधिबाहेक जेनिफर २१० दिन बढी नै नेपाल बसिसकेकी छिन्। ३ महिनाको मात्र भिसा लिएर आएकी उनले पटक पटक गरी भिसा थप्दा १ हजार ४०० डलर शुल्क तिरिसकिन्। भिसा थप्दा बिलम्ब जरिवाना पनि उनले तिरेकी छिन्। तै पनि अब उनीहरूले साउन १ भित्रै नेपाल छाड्नुपर्छ।
नेपाल नछाड्ने हो भने अब जेनिफरको बसाइ अवैध हुन्छ। जुन उनलाई मान्य छैन।
‘नेपालमा म एकदिन पनि अवैध रूपमा बस्न चाहँदिनँ,’ उनले भनिन्, ‘नेपाल सरकारले हामीलाई देश छाड्न थोरै समय दिएर लखेट्न खोज्यो।’
सरकारले जारी गरेको सूचनामा पनि असार ३१ गतेभित्र नेपाल छाड्ने विदेशीको हकमा भिसा नि:शुल्क नियमित गरिदिने, नेपाल बस्न चाहने तर साउन १ गते पछाडि जानेको हकमा भिसा शुल्क, विलम्ब शुल्क र जरिवाना लाग्ने उल्लेख छ।
यो प्रावधान लकडाउनपछि भिसा थप्दै नेपालमा २१० दिनभन्दा कम समय बसेका विदेशीलाई मात्र लागू हुन्छ। जेनिफर जस्तै २१० दिन बढी नेपाल बसिसकेका विदेशीले भने अनिवार्य नेपाल छाड्नुपर्ने अध्यागमन विभागका सुचना अधिकारी झंकनाथ ढकालले बताए।
‘पहिला पनि लकडाउन भएर खुलेको हो, अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल चलेका थिए,' ढकालले सेतोपाटीसँग भने, ‘अहिले पनि लकडाउन भएर विमानस्थल खुलेको छ, अवधि पुगेका पर्यटक अब फर्कनुपर्छ, लुकीछिपी बस्ने नियत राख्नुभएन।’
सरकारले समय तोकेरै जेनिफर र उनका साथीहरूलाई स्वदेश फर्कन दिएको निर्देशन मन परेको छैन। स्वदेश फर्कन सक्ने अवस्था नरहेको भन्दै उनीहरू यो निर्णय सच्याउन सरकारसँग माग राखेका छन्।
अमेरिकी नागरिक जेनिफर, बेलायती काशियन, स्पेनिस डालियल, इटालीयन मार्टा र इजरायली निट्जाले सामान्य अवस्थामा नियमित विमानसेवा सञ्चालन भएपछि मात्रै यसरी देश छाड्न आदेश दिनुपर्ने बताए।
‘नेपाल छाड्न हामीलाई कुनै समस्या छैन, फेरि फर्केर आउन पनि सकिन्छ,' उनीहरूले एकै स्वरमा भने, ‘अहिले हाम्रो देश फर्कन हामीले सक्ने विकल्प छैन।’
लकडाउन खुकुलो भएसँगै अहिले त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल आंशिक संचालनमा छ। विमानस्थलबाट नियमित उडान भन्दा चार्टर्ड उडान बढी छ। नियमित भनिएका उडानको पनि टिकट शुल्क सामान्य अवस्थाका नियमित उडानमा भन्दा कयौं गुणा बढी लाग्छ। त्यसमाथि टिकट पाउनै मुश्किल ।
अमेरिकाबाट नेपाल आउँदा जेनिफरले १ हजार डलरमा दुईतर्फी हवाई टिकट लिएकी थिइन्।
फर्कने बेला लकडाउन भएपछि उनको टिकट रद्द भयो। अहिले स्वदेश फर्कन जेनिफरलाई कम्तीमा ४ हजार डलरदेखि झण्डै १३ हजार डलर लाग्छ। यत्तिका रकम अहिले उनीहरूसँग छैन। यतिधेरै रकमको जोहो गर्न सरकारले दिएको १ साउनभित्रको समयसीमामा असम्भव भएको उनीहरू बताउँछन्।
जेनिफर र उनका साथीहरूले महँगै भए पनि स्वदेश फर्कन ४ हजार डलर लाग्ने टिकट लिन पटकपटक प्रयास नगरेका होइनन्।
अनलाइन बुकिङ गर्दा जतिखेर पनि ‘अनएभाइलेवल’ मात्र भएको उनीहरूले बताए।
भिसा सकिएका विदेशी पर्यटकलाई देश छाड्न सरकारले दिएको पछिल्लो निर्देशनले फन्दामा पारेको इटालियन पर्यटक मार्टाले बताइन्।
उनले भनिन्, ‘हामी स्वदेश फर्कन तयार छौं । सधैं यहाँ बस्ने होइन। सरकारले भनेको हामीले मान्नुपर्छ। तर हामीलाई हाम्रो देश जाने पहुँच भएन।’
नेपालबाट अरू देशमा जान पनि यतिबेला आफूहरूलाई समस्या हुने मार्टाले बताइन्।
विमानस्थल सामान्य अवस्थामा नचल्दासम्म आवश्यक शुल्क लिएर भिसा थपिदिन उनले नेपाल सरकारसँग आग्रह गरिन्। मार्टाले पनि नेपालमा अवैध रूपमा एक दिन पनि बस्न नचाहेको बताइन्।
जेनिफरकै अर्का बेलायती साथी काशियनले नेपाल छाड्न सरकारले दिएको समयसीमा एकदमै छोटो भएको टिप्पणी गरे।
‘नेपालमा अझै राम्रोसँग लकडाउन खुलेको छैन, यति छिट्टै देश छाड्न आदेश आयो’, काशियनले भने, ‘हाम्रा लागि सरकारले असल नीति लिन आवश्यक भयो।’
पहिलो लकडाउन खुलेपछि केही समय अन्तर्राष्ट्रिय उडान चल्दा पनि उनीहरू नेपालमै बसे।
त्यतिबेला नेपाल सरकारले पर्यटकलाई स्वदेश फर्कन अहिले झैं उर्दी जारी गरेको थिएन। आवश्यक शुल्क लिएर नेपालमै बस्न सक्ने निर्णय गरेको थियो।
नेपालमा पहिलो लकडाउन खुल्दा अमेरिका, बेलायत, युरोप लगायतका देशहरूमा कोरोनाको कहर उस्तै थियो।
उनीहरूलाई देश फर्कन भन्दा नेपालमै बस्नु सुरक्षित लाग्यो। बेलायती नागरिक काशियनका अनुसार दोस्रो लकडाउनअघि पनि सीमित विमान चलेका थिए, जुन महँगो थिए। त्यतिबेला केही साथीहरू फर्किए।
गर्भवती, बालबालिका भएका अभिभावक लगायत धेरैजसो अत्यावश्यक विदेशी फर्किए।
सरकारले साताभित्रै स्वदेश फर्कन बिहीबार पर्यटकलाई दिएको निर्देशन सच्याउन उनीहरूले सामूहिक रूपमा सम्बन्धित मन्त्री र अध्यागमन विभागलाई आग्रह गरेका छन्।
अलपत्र पर्यटकले आ-आफ्नो दूतावासमा सम्पर्क गरेर अवस्था सामान्य नहुँदासम्म नेपाल सरकारसँग समन्वय गरी नेपालमै बस्ने वातावरण मिलाइदिन अनुरोध गरेका छन्।
अमेरिकी नागरिक जेनिफरले दूतावासमा आफूले समस्या बताएर इमेल गरे पनि ‘रेस्पोन्स’ नगरेको गुनासो सुनाइन्।
उनले भनिन्, ‘मैले दूतावासमा इमेल गरेकी छु। हाम्रो समस्या समाधान गर्ने दूतावासको दायित्व हो। तर अहिलेसम्म ‘रेस्पोन्स’ गरेका छैनन्।’
जर्मन दूतावासले भने नेपालको अध्यागमन अधिकारीलाई पत्र लेख्दै आफ्ना नागरिक हेलेन निना मारियनलाई नेपालमै बस्ने वातावरण मिलाइदिन अनुरोध गरेको छ।
पत्रमा विमान व्यवसायिक र नियमित उडान नहुँदा हेलेन स्वदेश फर्कन असमर्थ भएकाले बिना बिलम्व शुल्क र जरिवाना भिसा थप्न आग्रह गरेको छ।
भारतको कलकत्तास्थित इटालीको कन्सुलेट कार्यालयले पनि नेपालको अध्यागमन विभागका महानिर्देशक नारायणप्रसाद भट्टराइलाई पत्र लेख्दै विमान पूर्णरूपमा नचलेकाले नेपालमा रहेका पर्यटकलाई भिसा दिन आग्रह गरेको छ।
पत्रमा नेपालमा रहेका इटालियन पर्यटकले भिसाको शुल्क तिर्ने समेत उल्लेख छ।
दूतावासले यसरी आग्रह गरे पनि सरकारले अर्को निर्णय लिएको छैन।
सरकारले बिहीबार जारी गरेको सूचनाका आधारमा पोखरामा बसेका १०० बढी विदेशी पर्यटकले अध्यागमन कार्यालय पोखरा पुगेर अहिलेसम्म आफू बसेको भिसा शुल्क तिरेका छन्।
नेपालमा अलपत्र पर्ने देखेर पर्यटकले गृह मन्त्रालयको समेत कार्यभार सम्हालेका अर्थमन्त्री विष्णु पौडेललाई इमेल लेखेका छन्। अलपत्र पर्यटकका तर्फबाट स्वीडेनका नागरिक बोबी डेइल्डले गृहमन्त्री पौडेलको सरकारी ठेगानामा इमेल पठाएका हुन्।
इमेलमा अध्यागमन कार्यालय पोखराका प्रमुख प्रमिला गौतमसँग कुरा गरेर आ-आफ्नो दूतावास र सरकारलाई पत्र पठाउन भनेकाले पत्र लेखेको बोबीले बताएका छन्।
बोबीले गृह तथा अर्थमन्त्री पौडेललाई लेखेको इमेलमा नेपालको सरकारी अधिकारीको काम गराइ पनि झल्किएको छ।
उनले इमेलमा लेखेका छन्,‘नेपालमा अलपत्र पर्यटकका तर्फबाट तपाईंलाई लेख्दैछु। किनकी, त्यहाँ कसले सोध्छ भन्नेमा निर्भर भएर फरक–फक उत्तर आउँछ।’
भिन्ना–भिन्नै कार्यालयले लगाउने भिन्ना–भिन्नै नियम र अध्यागमन अधिकारीले वास्तवमै आफूहरूको प्रश्नको जवाफ दिन नसकेको बोबीले लेखेका छन्।
यस सम्बन्धमा नेपालका विभिन्न धारणा पनि एक अर्कामा विरोधाभास रहेको उनले बताएका छन्।
योगा तालिमको प्रमाणपत्र लिएपछि जेनिफर।
‘जुलाई १ तारिखमा नेपाल सरकारले जनवरी १ देखि जुलाई २९ तारिखसम्म देशमा रहेका सबै पर्यटकलाई बिदा गर्न निर्देशन दिएको थियो। तर पोखरामा मे ४ देखि पूर्णरूपमा लकडाउन भयो। जुलाई महिनाको सम्पूर्ण उडान महँगो चार्टर उडानमात्र निर्धारित छन्। यी उडान पनि शतप्रतिशत बुक भइसकेको छ। सरकारको आदेश पालना गर्न सयौं पर्यटकलाई पहुँच नै भएन।’ बोबीले इमेलमा बिलौना गरेका छन्।
यस्तो परिस्थितिमा जुलाई ३० तारिखका दिन बिना गल्ती सयौं पर्यटक गैरकानुनी रूपमा नेपाल बसेको ठहरिने भन्दै बोबीले त्यसपछि पक्राउ र निर्वासनको विषय बन्ने बताएका छन्।
कोभिड–१९ को डेल्टा भेरियन्ट बिना परीक्षण भइरहेको फैलावटले नेपाललाई दर्जन बढी देशले ‘रेड लिष्ट’मा राखेको भन्दै बोबीले नेपालमा १४ दिन बसेका जो कोहीलाई प्रवेश निषेध गरेको गृहमन्त्री पौडेललाई बताएका छन्।
‘हामी गृह मन्त्रालय र नेपाल सरकारलाई विनम्रताका साथ अनुरोध गर्छौं कि व्यवसायिक रूपमा अन्तर्राष्ट्रिय उडान पूर्ण रूपमा संचालन नहुँदासम्म जुलाई २८ देखि लकडाउन अवधि र अर्को सूचना नआउँदासम्म भिसा नि:शुल्क होस्’, बोबीले गृहमन्त्री पौडेललाई लेखेका छन्, ‘हाम्रा कथा चौतर्फी साझा गरेर सहयोग गर्न तपाई सहयोग गर्नुहुन्न ?’ आफूहरूप्रतिको चिन्ता र हेरचाहका लागि उनले मन्त्री पौडेललाई धन्यवाद दिएका छन्।
गृहमन्त्री पौडेललाई पठाएको इमेलको ‘रेस्पोन्स’ भने अहिलेसम्म नआएको बोबीले बताएका छन्।
अध्यागमन अधिकारीले समस्या नै नबुझेको भन्दै पर्यटक भिसामा नेपाल बसेका विदेशी आत्तिएका छन्।
सरकारले आफ्नो निर्णय परिवर्तन नगरे आफूहरूसँग अर्को उपाय नै नभएको उनीहर"को भनाइ छ।
अमेरिकी नागरिक जेनिफरले सरकारको निर्णय मान्नुको विकल्प नभएको बताइन्।
उनले भनिन्, ‘सरकारको निर्णय त जुनसुकै देशको पनि मान्नुपर्छ, अहिले हाम्रो लागि भिसा थप्नेबाहेक अरू विकल्प नभएको कुरा सरकारले पनि बुझ्छ भन्ने आशा छ।’
यसअघि पनि सरकारले ‘जहाँ छ त्यहीँ बस्नु’ भन्ने आदेश मानेरै आफूहरू पोखरा बसेको उनले बताइन्।
सगरमाथा बेस क्याम्पमा जेनिफर।
कोभिड-१९ को महामारीमा नेपाल सरकारले विदेशी पर्यटकका विषय गम्भीर रूपमा नलिएको जेनिफरले गुनासो गरिन्।
‘युद्धका बेला त शरणमा बसेका विदेशीलाई बस्न दिनुपर्छ, कोरोना महामारीले ठप्प भएको बेला किन नदिने?,’ उनले भनिन्, ‘हामी लडाइँ झगडा गरेर बसेको छैन, यस्तो अवस्थामा शुल्क तिरेरै बस्छौं भन्दा पनि जबरजस्ती पठाउन खोजियो।’
अध्यागमन विभागका सूचना अधिकारी झंकनाथ ढकालले विदेशीलाई लकडाउन अवधिको शुल्क छुट दिएको र लकडाउन खुलेको अवधिको मात्र शुल्क लिएको बताए।
विदेशी पर्यटकलाई नेपाल छाड्न जारी गरेको सूचनामा समेत एक साता समय थप गरेको भन्दै उनले फ्लाइट खुलेकाले अहिले पनि विदेशी स्वदेश फर्कन सक्ने बताए।
‘हामी पर्यटक ‘फ्रेण्डली’ नै छौं, नेपालमा बसेका विदेशीलाई सरकारले धेरै छुट दिएको छ’, ढकालले भने, ‘सरकारले गरेको निर्णय हामीले कार्यान्वयन गरेको हो, नेपालमा अप्ठ्यारो नपरोस् भनेर यस्तो निर्णय गरेको हो।’
ढकालको यस्तो भनाइले पोखरामा अलपत्र विदेशी झनै आत्तिएका छन्।
इटालीयन नागरिक माार्टाले अध्यागमनका अधिकारीहरूले वास्तविक समस्या नै नबुझी पठाउन खोजेको बताइन्।
‘भिजिट नेपाल–लाइफ टाइम एक्पेरिन्सेस् भनेको थियो, लकडाउन भयो,’ उनले भनिन्, ‘हाम्रो देश फर्कने अवस्था नै छैन कसरी जाने ?’
प्रकाशित मिति: शनिबार, असार २६, २०७८, ०३:११:००